PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PES 2019 PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
PES 2019 PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ APK ကို
အဆိုပါ 8,000 + ကစားသမား animations တွေကို မှစ. အသင်းဝိသေသ playstyles ရန်နှင့်ပင်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်-အရာအားလုံးအပေါ်ယူပြီး၏စိတ်လှုပ်ရှားအတူတူပါ!
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, Unreal ENGINE4များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသင်အမြင်အာရုံသစ္စာနှင့်ချောမွေ့ကစားသမား animations တွေကိုတစ်ခုမကြုံစဖူးအဆင့်သို့နှင့်အတူလှပသောဂိမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမှော်ယခုအချိန်တွင်နေထိုင်ပြီးရှူရှိုက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ 12 အသစ်များကိုအဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်လိုင်စင်အတွက်ဂိမ်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီ။
ဘက်ခမ်း, Zico, Romario နှင့် Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini နှင့် Kahn နဲ့တူကမ္ဘာကျော်ဒဏ္ဍာရီများကဲ့သို့သီးသန့်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများကစားသမား PES 2019 ပေါ်လာဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
PES 2019 အမြဲတမ်းမှန်ကန်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူသစ်ကိုတိုက်ရိုက် Update ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုကျေးဇူးတင် aligned ပါလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သောဘဝပွဲကနေနောက်ဆုံးပေါ်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အင်ဖိုအပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ In-ဂိမ်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
[စနစ်လိုအပ်ချက်များ] ဒီ app ကိုအွန်လိုင်းမှဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူဂိမ်းကိုခံစားပေးပါ။
[ခေါင်းစဉ်ပြရန်] သင်ကစားပွဲလျှောက်လွှာ၏ဘာသာစကားကို setting တွင်ဂျပန်ကို select ပါလျှင်, "က Eleven 2019 အနိုင်ရရှိမှု" ပြသပါလိမ့်မည်။ သငျသညျဂျပန်ထက်အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို select လုပ်ပါလျှင်, "PES2019 PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ" ပြသပါလိမ့်မည်။
ပြဿနာများကိုတစ်အရေအတွက်က fixed ခဲ့ကြသည်။
PES 2019 PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
1.48 GB ကို